Nahazo vahana ny fizahan-tany Ginea Ekoatorialy miaraka amin'ny Président Award
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nahazo vahana ny fizahan-tany Ginea Ekoatorialy miaraka amin'ny Président Award
Septambra 21, 2017
Eo amin'ny sisin'ny Fivoriambe faha-72 an'ny fivorian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana, ny Lehibeny, Obiang Nguema Mbasogo, filohan'ny Guinea Equatoriale, Ray ary Architect de Guinea Equatoriale moderina ary mpanorina ny Party Democratico Guinea Ecuatorial (PDGE) dia nahazo ny Black History Month USA 2017 ny loka amin'ny Alarobia.
Ny sehatry ny fizahan-tany Ginea Ekoatera dia nanjary iray amin'ireo tanjona afrikanina mampanantena indrindra. Avy amin'ny fijerena vorona, fizahantany ara-tontolo iainana, fitsangatsanganana an-tsehatra, taranja golf tompon-daka, morontsiraka fotsifotsy, ary fitoniana eo an-toerana no nahatonga an'io safidy tsara io hitsidihana.
Ny tanjon'ny Black History Month USA dia ny hanitarana ny fahatsiarovana an'i Amerika amin'ny volana Febroary amin'ny fanasongadinana firenena afrikanina iray isan-taona mandritra ny 365 andro. Niorina tamin'ny taona 1994, ity hetsika ity dia iarahan'ny South Africa Arts International, Ltd. (SAAI) miorina amin'ny tanjona hampitombo ny fizahan-tany, ny fampiasam-bola mivantana, ny fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana sy ny kolontsaina any amin'ny firenena afrikanina.
Air India dia mandefa sidina mivantana avy any New Delhi mankany Copenhagen
Ny fanontaniana momba ny faharetana, ny CSR ary ny fivoriana dia voavaly tao amin'ny IMEX America 2017